မျက်လုံးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူအများ လုပ်လေ့ရှိကြတဲ့ အမှားများ - Hello Sayarwon
မျက်လုံးဆိုတဲ့ အာရုံခံစနစ်တစ်ခုထဲက ပေးပို့တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေဟာကျန်အာရုံခံစနစ်တွေဖြစ်တဲ့ အကြား၊ အရသာ၊ အနံ့အသက် နဲ့ အထိအတွေ့တို့ ပေးပို့တဲ့ သတင်းအချက်အလက် စုစုပေါင်းထက်ပိုများပါတယ်။ မျက်လုံးကို တာဝန်ယူထားရတဲ့ ဦးနှောက် အစိတ်အပိုင်းကလည်း ကျန်အာရုံခံစနစ် စုစုပေါင်းထက် ပိုများပါတယ်။ မျက်လုံးတွေဟာ သိစိတ်က ပေးပို့တဲ့ သတင်းအချက်အလက်ပမာဏ တစ်ဝက်ခန့်ကို ပေးပို့နိုင်တဲ့ အင်္ဂါတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မျက်လုံးတွေဟာ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ အရှုပ်ထွေးဆုံး အာရုံခံ အင်္ဂါတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများဟာ အမြင်အာရုံပျက်စီးခြင်းဆိုတာ ဇရာကြောင့် မလွဲမသွေဖြစ်ရတဲ့ ရလဒ်လို့သာ အထင်မှားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း မျက်လုံးကျန်းမာရေးနဲ့ လျော်ညီတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေ ရှိမယ်ဆိုရင် မျက်လုံးကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ရောဂါ တော်တော်များများကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးထဲမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ အတွက် အရမ်း အရေးပါတဲ့ အင်္ဂါဖြစ်တဲ့ မျက်လုံးတွေ မပျက်စီးစေရန်အတွက် ရှောင်သင့်တဲ့ အလေ့အကျင့်လေးတွေကို Hello Sayarwon ပရိတ်သတ်ကြီး နဲ့ ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ နှစ်စဉ် မျက်လုံးစစ်ဆေးမှု ပုံမှန်မလုပ်ခြင်း။
အထူးသဖြင့် သင့်အနေနဲ့ အသက် ၄၀ ကျော်လာတဲ့ အချိန် မျက်လုံးကို နှစ်စဉ်ပုံမှန် စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ မျက်လုံးဆိုင်ရာဆရာဝန်များက မျက်စင်းဆေးအနည်းငယ်ကို အသုံးပြုပြီး မျက်လုံးတွေ ပြန့်ကားလာခြင်းနဲ့ သူငယ်အိမ်ရဲ့ အခြေအနေကို စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီး ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ ရေတိမ်၊ ဆီးချိုကြောင့် သွေးကြောထဲ သကြားဓါတ်ကြာမြင့်စွာ များနေတဲ့အခါ မျက်လုံးအာရုံခံလွှာ (retina) တွေထဲက သွေးကြောတွေကို ပျက်စီးစေတဲ့ မျက်လုံးဝေဒနာ၊ Macular Degeneration လို့ခေါ်တဲ့ မျက်လုံး အာရုံခံလွှာ အလယ်တည့်တည့် အပိုင်းပျက်စီးတဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်နေသလားဆိုတာကို စစ်ဆေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ မျက်လုံးယားခြင်းကို ဂရုမစိုက်ခြင်း။
အနီရောင်နဲ့ မျက်ရည်တွေထွက်ရှိပြီး ယားယံကာ ပူစပ်ပူလောင်ဖြစ်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေဟာ
ဓါတ်မတည့်ခြင်းကို ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုပြနေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ မျက်လုံးက-
မျက်လုံးထဲ အမှုန်ဝင်နေသလို ခံစားရမယ်၊
ထူထဲပြီး ချွဲကပ်တဲ့ မျက်ချေးများထွက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ကူးစက်ရောဂါခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ ဒီလို ဝေဒနာတွေကို ခံစားနေရမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ထံ အမြန်ဆုံးသွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။ ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်နေတာကို မကုသဘူးဆိုရင် မျက်လုံးကို ပျက်ဆီးစေနိုင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေထံကိုလည်း ကူးစက်စေနိုင်ပါတယ်။
၃။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလျှင်ရခြင်း မျက်လုံးကို မစစ်ဆေးခြင်း။
မျက်လုံးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒဏ်ရာသေးသေးလေးရမယ်ဆိုရင်တောင် မျက်လုံးထိခိုက်တာနဲ့
ဆရာဝန်ထံ အမြန်ဆုံးသွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သင်ဟာ-
သူငယ်အိမ်ဟာ တစ်ဖက်မှ သူငယ်အိမ် (pupil) နဲ့ ပုံစံမတူဘဲ ကြီးလာတာကို ကြုံရမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးသွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။
၄။ နေကာမျက်မှန် ဝတ်ဆင်တဲ့ အကျင့်မရှိခြင်း။
နေကာမျက်မှန်တွေဟာ နေရောင်က ထွက်တဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (ultraviolet (UV)) တွေမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီရောင်ခြည်တွေဟာ မျက်လုံးကို မျက်စိအတွင်းတိမ်နဲ့ Macular Degeneration လို့ခေါ်တဲ့ မျက်လုံး အာရုံခံလွှာ အလယ်တည့်တည့် အပိုင်းပျက်စီးတဲ့ ရောဂါ၊ တာရီဂျီယမ် (Pterygium) လို့ခေါ်တဲ့ မျက်ကြည်လွှာအပေါ်က အကျိအချွဲတွေ ကြီးလာတဲ့ ဝေဒနာ ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နေကာမျက်မှန်ဝတ်မယ်ဆိုရင်လည်း ultraviolet A (လှိုင်းရှည်)နဲ့ ultraviolet B (လှိုင်းတို) တွေကို ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းတားဆီးပေးနိုင်တဲ့ နေကာမျက်မှန်တွေကိုသာ ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
၅။ မျက်လုံးကို ပွတ်ခြင်း။
မျက်လုံးကို ပွတ်ခြင်းဟာ မျက်လုံးကို ပိုယားယံစေပြီး မျက်လုံးတွင်းက သွေးကြောတွေကို ပျက်ဆီးစေပါတယ်။ ဒီလို ပွတ်ခြင်းက မျက်လုံးထဲ ဘာဝင်ဝင် ပိုဆိုးလာစေတာပဲ ရှိပါတယ်။
လက်တွေဟာ မျက်လုံးအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ပိုးမွှားတွေနဲ့ အမြဲထိတွေ့နေရတဲ့အတွက်
မျက်လုံးကို ပွတ်မယ်ဆိုရင် သင့်လက်က သေချာဆေးထားရဲ့လားဆိုတာ ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
၆။ ဖုန်း Screens၊ ကွန်ပျုတာ Screens များကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ကြည့်ရှုနေခြင်း။
ဖုန်းScreens ၊ ကွန်ပျူတာ Screens တွေကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ သင့်ရဲ့ မျက်လုံး ကြွက်သားတွေက
ပိုအလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ Screens တွေကို အချိန်ကြာမြင့်စွာကြည့်ရှုခြင်းက မျက်လုံးတွေကို ပင်ပန်းစေပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ Screens တွေကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ကြည့်ရသူတွေ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ နည်းလမ်းကတော့ ၂၀-၂၀-၂၀ စည်းမျဉ်းပါ။ ၂၀-၂၀-၂၀ စည်းမျဉ်း ဆိုတာက Screens ကိုကြည့်တဲ့ အချိန် မိနစ် ၂၀ ပြည့်တိုင်း ပေ ၂၀ အကွာအဝေးက အရာတစ်ခုကို စက္ကန့် ၂၀ ခန့်ကြည့်ရှုပေးပါ။ ဒါ့အပြင် မျက်တောင် မကြာခဏ ခတ်ခြင်းကလည်း မျက်လုံးကို စိုစွတ်စေပြီး ရုံးမှာဆိုရင်လည်း ကွန်ပျူတာ Screens မှာတပ်ဆင်ရတဲ့ အလင်းရောင်ကို လျှော့ချပေးတဲ့ အကာကွယ်တွေကလည်း မျက်လုံး ကျန်းမာရေး အတွက်ကောင်းမွန်ပါတယ်။
၇။ မျက်ကပ်မှန်တွေကို သေချာမသန့်ရှင်းခြင်း။
မျက်ကပ်မှန်တပ်သူတစ်ယောက်ဆိုရင် မျက်လုံးတွေ ကျန်းမာနေဖို့ အတွက် မျက်ကပ်မှန်တွေကို ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားထားတဲ့ ဆေးရည်နဲ့ ပုံမှန်ဆေးကြောသင့်ပါတယ်။ မျက်ကပ်မှန်ဆေးတဲ့ အခါမှာလည်း ရေ (သို့မဟုတ် ) တံတွေးနဲ့ ဘယ်တော့မှ မဆေးသင့်ဘဲ သန့်ရှင်းတဲ့ဘူးထဲမှာပဲ သိမ်းထားသင့်ပြီး ဗူးကို လည်း ၃ လပြည့်တဲ့ အခါတိုင်း လှဲလှယ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိမ်ယာဝင်ချိန်မှာလည်း မျက်ကပ်မှန်တွေကို ချွတ်အိပ်ဖို့ မမေ့သင့်ပါဘူး။ တစ်ခါသုံး မျက်ကပ်မှန်ကို အသုံးပြုရမယ်ဆိုရင်လည်း ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားတဲ့အချိန် လှဲလှယ်သင့်ပါတယ်။
၈။ မျက်ကပ်မှန်ကို ရေချိုးတဲ့ အချိန်ဝတ်ထားခြင်း။
ရေချိုးတဲ့အခါ မျက်ကပ်မှန်မချွတ်တဲ့အခါ ရေထဲမှာပါဝင်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေက မျက်ကပ်မှန်မှာ ကပ်နေနိုင်ပြီး မျက်လုံးကို ကူးစက်ရောဂါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက်
ရေမချိုးခင် မျက်ကပ်မှန်တွေကို အရင် ချွတ်သင့်ပါတယ်။
၉။ မိတ်ကပ်များကို မဆေးမကြောဘဲထားခြင်း။
မျက်တောင်ခြယ်ဆေး (mascara)၊ eyeliner ၊ မျက်ခွံဆိုးဆေးတောင့်( eye shadow) မှ အကြွင်းအကျန်အမှုန်တွေဟာ မျက်လုံးထဲဝင်နိုင်ပြီး ကူးစက်ရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မျက်လုံးဆိုင်ရာ မိတ်ကပ်တွေ လိမ်းထားရင် ညအိမ်ယာမဝင်ခင် မျက်နှာသစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မိတ်ကပ်မဖျက်မိလို့ မျက်လုံးတွေနီလာမယ်၊ နာကျင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ထံ အမြန်ဆုံးသွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။
၁၀။ ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်တဲ့ မျက်မှန်တွေကို မဝတ်ခြင်း။
ဝရိတ်ဆော်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အားကစားလုပ်နေတဲ့အချိန်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်
ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ပေးတဲ့ မျက်မှန်တွေကသာ သင့်မျက်လုံးပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် မဟုတ်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ကိုင်တဲ့အခါမှာ ဒီလို လေကာ၊ ရေကာမျက်မှန်တွေကို ဝတ်ပြီး မျက်လုံးကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက် ပြင်ဆင်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
၁၁။ မိသားစု မျိုးရိုးကို မစစ်ဆေးခြင်း။
သင့်မိသားစုထဲမှာ မျက်လုံးရောဂါ တစ်ခုခု ရှိမယ်ဆိုရင် ဒါကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ ရောဂါ ဖြစ်လာတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် ကုသမှု ခံရယူနိုင်မှာပါ။ လေ့လာချက်တွေအရ
မျက်လုံးကန်းရခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်း ၂ ခုဖြစ်တဲ့ မျက်လုံးရေတိမ် (glaucoma) နဲ့
Macular Degeneration လို့ခေါ်တဲ့ မျက်လုံး အာရုံခံလွှာ အလယ်တည့်တည့် အပိုင်းပျက်စီးတဲ့ ရောဂါတို့ဟာ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ ဆက်နွယ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၁၂။ မျက်မှန်ကို ပုံမှန်မဝတ်ခြင်း။
သင့်ရဲ့ အမြင်အာရုံဟာ အချိန်နဲ့ အမျှပြောင်းလဲနေပါတယ်။ သင့်မျက်လုံး ကျန်းမာရေးအတွက် ဒီအမြင်အာရုံတွေ ပြောင်းလဲလာတာကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီသတိထားဖို့လိုပြီး အမြင်အာရုံ ပြောင်းလဲလာတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြမယ်ဆိုရင် အမြင်အာရုံ ဆိုးဆိုးရွားရွား မပျက်စီးနိုင်အောင် ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ တစ်ခြားသော ခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို ပျက်စီးစေနိုင်သလိုပဲ မျက်လုံးကို လည်း ပျက်ဆီးစေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်မယ်ဆိုရင် မျက်စိအတွင်းတိမ်ဖြစ်လာခြင်း၊ အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ နာဗ်ကြောများ ပျက်စီးလာခြင်း၊ မျက်လုံး အာရုံခံလွှာ အလယ်တည့်တည့် အပိုင်းပျက်စီးတဲ့ ရောဂါ (Macular Degeneration) တို့ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေအားလုံးက နောက်ဆုံးမှာ မျက်လုံးကန်းသည်အထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Accessed (25. June. 2018)